Tips For Rokufambira By Train With Kids In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > Tips For Rokufambira By Train With Kids In Europe
Nguva yekuverenga: 6 maminitsi(Last Updated On: 06/10/2020)
Rugare uye anakidze. Mazwi maviri awusingawanzo kunzwa vabereki vachishandisa kana vachiudza avo yezororo pakufamba nyaya nevana. saka, tafunga kukupa akakosha matipi ekufamba nechitima nevana muEurope.
Pane chimwe chinhu pamusoro nezvitima kuti anonyaradza vana nenzira mhepo kana motokari kufamba regai. (We akanyora Blog rose nei chitima kufamba zviri nani inoita uye Nani pane Driving kana uchida mamwe zvinogutsa). Same anoenda nokuti vakuru zvakare! Family pamatafura, unopfuura nharaunda, nzvimbo famba, Datenroku zvivako, nguva Chat uye kubata uye, mufaro mufaro, hapana mukwende kurambidzwa. Kupindana rails yakachengeteka, akasununguka uye inokwanisika kana kurongwa pachine. Dzidzisai vana venyu kuti tinakidzwe chitima kufamba kubvira pazera duku uye ivo vachava hwose vaitendeuka. Panguva iyi, heano Tips nokuti vaifamba nechitima nevana muEurope.
Tips nokuti vaifamba nechitima nevana muEurope: Uyai Activities kuti Occupy ari Kids
Nepo akatasva chitima iri kunonakidza pachayo uye achitarira kunze anogona kuchengeta vana kuvaraidzwa kwemaawa, isuwo hunoratidza kuunza mamwe mabasa zvakare. Book pachine uye hwakachengeteka pamahwindo chigaro ine tafura unokubvumira kuparadzira coloring mabhuku uye nezvikafu zvishoma!
Vamwe chitima mabasa varumbidzwa anosanganisira:
mahwendefa: Zvakafanana ndege, hwendefa kunogona kuva mukuru nzira zvakaitika nguva. Vakawanda nezvitima mu Europe pa vakasununguka Wi-Fi, asi basa nguva dzose kodzero, saka iva nechokwadi chokuti iwe download mabhaisikopu uye mitambo kumba. On nezvitima dzakawanda, anenge ose chete chigaro ane imwe nzira yokubudisa kuchengeta Electronics ako mhosva, asi kuvarayira kumba zvisinei – muuye pamahedhifoni!
makara mabhuku: makara mabhuku uye crayons vari kufarira pasinei nezera.
Games: Kana unogona kubata zvigaro vane tafura, pane zvakawanda nzvimbo kuridza makadhi kana mumwe mutambo pakufamba. Kusiyana nendege, hamungambovi kunetseka pamusoro mhirizhonga, saka tora mhuri yako kufarira mutambo uende mutambo. Izvi vaigona kuva mukana wakakwana kuti chaizvoizvo kupedzisa bhora ndiye!
Play matoyi: Zvichienderana mwana wako zera uye mubereko, kuunza mamwe Matchbox motokari kana zvimwe Zvidhori (funga Polly Homwe). mwanakomana wangu anoedzesera tafura ari tireki apo mwanasikana wangu anomisawo nezvidhori kake kuti vafare pamusoro.
Tips nokuti vaifamba nechitima nevana muEurope: Iva nehanya nevamwe vanhu
Ruzhinji rwevanhu zvichava kunzwisisa chaizvo kana uine kuchema mwana kana ane agumbuka kukambaira kuti zvinotora nguva kudzikama. Not urongwa mberi uye kurega dzenyu duku imwe yakawanda yokunyatsoongorora kubhoekana nokuda kwokushayiwa rwekuronga angasadhakwa tsitsi zvikuru. Plan varaidzo kuti haasi intrusive kana zvichida kuti mba nharo. Hatidi kuti kunyora Tips kuti vaifamba nechitima nevana muEurope, kuti murege kuva imi…chete Hazviiti!
Tips nokuti vaifamba nechitima nevana muEurope: Kuenda usiku hwese?
Edzai bhuku kamuri pamusoro akarara chitima. Kutora nezvitima neusiku rinotyisa, uye kurara kazhinji kwazvo nokuda dzinongoitika kuzunungusa chitima. Zvinonyaradzawo saka inonakidza varara uye uchimuka mune imwe nyika. Sleeping nezvikamu siyana ne nyika asi kana uri chete vatatu uye vasingadi mutorwa kugoverana nemi zvino zvimwe rauchagara vanofanira bhajeti kutenga imwe mubhedha kuchengeta wako akarara mupanda private.
Tips nokuti vaifamba nechitima nevana muEurope: Bvumira pachenyu yakawanda nguva apo kwava kure
nezvitima Most chete kumisa kuti maminitsi mashoma kunonyanyisa pa mumwe chiteshi, maminitsi saka kumativi mashanu pamberi wasvikapo unofanira kuva kurongedza zvinhu, akasimba akarara vana, takapfeka nguvo uye kuunza mabhegi kure panhongonya pasherefu. Izvi Hazvizivikanwi sangano rinopa yakawanda norugare rwepfungwa kunyanya kana uine zvakawanda vana kana yakawanda mukwende. Kana papuratifomu akabatikana, nechokwadi mabhegi ako uende kure kutanga kubva panzira mikova, ipapo vauye vana pasi pashure kudzivirira munhu vopedzisira varasika.
Tips nokuti vaifamba nechitima nevana muEurope: Uyai Stroller Your On Board
Chimwe chikonzero kushandisa kudzidzisa pachinzvimbo nendege ndiko kuti unogona Sungira vana venyu chaimo stroller uye vagokungurusa navo zvakanaka vapinde chitima, Pasina musoro wekusabvarura uyezve kusanganidza iye mutyairi. Iwe unogona dzimwe nguva kunyange kupaka yako stroller munzvimbo yekunwa kana dzimwe nzvimbo dzakashama muchitima (akadai svikika nharaunda chero haisi inogarwa munhu ari pawiricheya), izvo zvinobatsira vechiduku vana ndiani kurara stroller yavo. Iri nani rakakura pamusoro ndege kufamba sezvo ini amuwane kuwana mbudzana kurara muchitima nyore zvikuru.
Tips nokuti vaifamba nechitima nevana muEurope: svika About 30 maminitsi Early
Chimwe chikuru zvakanakira achifamba nechitima nevana muEurope kana kumwe munyika yacho kuti. Ko kupa pachako nguva kusvika! Kusiyana nendege, haufaniri kusvika pachiteshi chezvitima kure mberi nguva. Apo vaifamba vana, isu hunoratidza kusvika pamusoro 30 maminitsi mangwanani kuti pachako rakamiswa, zvichida kwokutanga kana zvishoma yokugezera Kumira uye tudyo musisiri dziri wenyaya. yemanyorero, ari yevanogara muitiro haangazorori kutanga kusvikira 10 maminitsi asati kuenda pa akawanda, asi iwe haudi scramble uye ukaona achimhanya kuburikidza takabatikana chiteshi.
Pack nezvikafu zvishoma!
Pamwe anokosha muromo ose. Snacks! A yakawanda daro refu yenzira inoratidza renguva yakazara dzokudyira motokari dzakawanda mbudzana-ushamwari chikafu – funga tositi French, grilled chizi, meatballs vane Penne. On mapfupi pakutengeserana, nezvitima vane tudyo mbariro kupa sandwiches, Bagels, Chips, uye nezvimwe nezvikafu zvishoma. Ungada arongedze vamwe vana venyu kufarira nezvikafu zvishoma zvisinei zvazvo! Vaifamba kacheche? Uya mwana zvokudya kana payakavakirwa uye kubvunza zvokudya-basa mudonzvo ushamwari iwe. Unogona kuita Reservations nokuti yokudyira motokari nguva pfupi pashure chebhodho. Sezvo nguva dzose kana kufamba nevana, nguva dzose unofanira kuuya nezvikafu zvishoma uye zvinwiwa, kana usingagoni kuwana nzvimbo kana tudyo bhaa yasarudza dzima chete kana vana venyu kukuzivisai kuti vari kufa nenzara.
Akagadzirira Akashinga chitima rwendo pamwe vana zvino kuti uri vakapakata Tips wedu achifamba nechitima nevana? Hukuru! Book matikiti wako Save A Train, dzichikunetsa-isina!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo? unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-travelingy-train-kids-europe%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#zororo #kidsonatrain #kubvuta #travelwithkids europetravel www longtrainjourneys
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Belgium, Rovedza Kufamba Britain, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Italia, Train Travel The Netherlands, Chitima Kufamba UK, Travel Europe